International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Statement: A non-inclusive Nationwide Ceasefire Agreement will not bring peace
Statement: A non-inclusive Nationwide Ceasefire Agreement will not bring peace
The Women's League of Burma (WLB) is gravely concerned that the government's planned signing of the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) on October 15 with only eight armed groups will not lead to peace, but to an escalation of conflict.
Camps for internally displaced in northern Burma are already facing critical humanitarian shortages due to Naypyidaw's restrictions on access, and funding cuts from international donors. New displacement is placing further burdens on the camps, with women and children bearing the brunt of the hardship.
"We do not trust Naypyidaw's peace process. It's clearly justagame to divide the ethnic groups, while continuing to attack them," said WLB spokesperson Naw Wahkushee.
WLB is also concerned at Naypyidaw's failure to ensure women's participation in the peace process. Ethnic armed groups agreed at the Lawkheelar summit last June to amend the NCA text to guaranteeaquota of at least 30% women in future political dialogue. However, Napyidaw has refused to amend the text, which states that only an "appropriate" proportion of women take part in political dialogue. This vague, subjective wording provides no guarantee of meaningful women's participation, and directly contradicts the government's claims to be implementing UN Security Council Resolution 1325.
"The NCA is not only non-inclusive for the ethnic groups, it's also non-inclusive of women," said Naw Wahkushee
Worryingly, despite Naypyidaw's divisive, non-inclusive approach, the draft NCA text was already welcomed in March this year by the United Nations Special Envoy Vijay Nambiar and other foreign diplomats in Yangon.
To build genuine peace, WLB urges international donors to stop prioritizing their relations with Naypyidaw over the interests of women and children in ethnic conflict zones. Donors should review their unconditional support for Naypyidaw's "peace process," and start exerting pressure on Napyidaw to immediately end its military offensives and systematic abuses, and begin troop withdrawal from the ethnic areas asaprelude to political dialogue.
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်။
အားလုံးမပါဝင်သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မဖော်ဆောင်နိုင်ပါ။
၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်
အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) သည် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(၈)ဖွဲ့သာ ပါဝင်သောအစိုးရမှ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးမတည်ပဲ ပဋိပက္ခများ ပိုမိုဆိုးရွားစေမည်ကို အလွန်ပင်စိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။
လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကြေငြာပြီး နောက်ပိုင်းတွင်ပင် လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က နေပြည်တော်သည် ကချင်ပြည်နယ်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသများသို့ တပ်အင်အား အများအပြား စေလွှတ်ခဲ့ပြီး ထိုးစစ်သစ် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် အရပ်သားလူထုများအပေါ် ကျယ်ပြန့် ကြီးမားသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေ သည်။ ယင်းသည် အိုးအိမ်စွန့်ခွာမှု အသစ်များကို ဖြစ်စေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိနှင့်ပြီးသား ဒုက္ခသည် ၂ သိန်းကိုထပ်မံတိုးပွားစေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ ပြည်တွင်းအိုးအိမ်မဲ့များ၏ စခန်းများတွင် နေပြည်တော်၏ အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုနှင့်နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ရံပုံငွေဖြတ်တောက်မှုများကြောင့် လူသားချင်းစာနာသော အကူအညီများ အလွန်အမင်း ချို့တဲ့နေပြီးဖြစ်သည်။ အသစ် ရွှေ့ပြောင်းမှုများသည် အမျိုးသမီများနှင့်ကလေးသူငယ် များကို ဆိုးရွားသော ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုများ ကြုံတွေ့နေရသည့်ဒုက္ခသည် စခန်းများကို နောက်ထပ် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေသည်။
WLB သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်း အနေနှင့် နေပြည်တော် အပေါ်ထောက်ခံမှု တိုးများလာခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတလွှားရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည်များအတွက် နောက်ထပ်ရံပုံငွေ ဖြတ်တောက်မှု များကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အတင်းအဓမ္မနေရပ်ပြန်ပို့မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို စိုးရိမ်သည်။
"ကျွန်မတို့ နေပြည်တော်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို မယုံဘူး။ ဒါဟာ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေကို တဖက်မှာ တိုက်ခိုက်နေဆဲရှိနေ တာဟာ တိုင်းရင်းသားတွေကိုသွေးခွဲ ဖို့ကစားတယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ်။"ဟု အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနော်ဝါးခူရှီးကပြော သည်။
အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) သည် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှုအပေါ် နေပြည်တော်အနေနှင့် အာမခံမှု မပေးနိုင်ခြင်းကိုလည်း စိုးရိမ်မိသည်။ ဇွန်လအတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် လော်ခီးလာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အ ဖွဲ့အစည်းများ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် အနာဂတ် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် အမျိုးသမီးအနည်းဆုံး၃၀% ကို ခွဲတမ်းအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ပြုရန် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် စာသားများတွင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နေပြည်တော်မှ စာသားများ ပြင်ဆင်ရန်ကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ပွဲများတွင် "သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သော" အမျိုးသမီးအရေအတွက်ကိုသာ ပါဝင်ခွင့် ပြုမည်ဟုဆိုသည်။ ဤဝေေ၀၀ါးဝါး ဖော်ပြချက်သည် အစိုးရ၏ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ သဘောတူညီချက် ၁၃၂၅ အား အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟူသော ကတိပြုချက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေသည်။
"တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ဟာ တိုင်းရင်းသား အုပ်စုတွေ အားလုံး ပါဝင်ရုံသာမကပဲ အမျိုးသမီးတွေလည်း ပါဝင်ခွင့်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။" ဟု နော်ဝါးခူရှီးကပြောသည်။
နေပြည်တော်၏ အားလုံးပါဝင်မှုမရှိသည့် ချည်းကပ်မှုကို ယခုနှစ် မတ်လအတွင်းက ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် ဗီဂျေးနမ်ဘီးယား နှင့်ရန်ကုန်ရှိ သံတမန်များက မှားယွင်းစွာပင် ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များအနေဖြင့် ပဋိပက္ခဒေသများရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကျော်လွန်ပြီး သူတို့၏နေပြည်တော်နှင့်ဆက်ဆံရေးကို ဦးစားပေးခြင်းအား ရပ်တန့်ရန် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) ကတောင်းဆိုသည်။ အလှူရှင်များအနေနှင့် နေပြည်တော် "ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်" အား အကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံနေခြင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး နေပြည်တော်အား စစ်ရေးထိုးစစ်နှင့် စနစ်တကျ ချိုးဖောက်မှုများကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်ရန်နှင့်နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများအကြိုအနေနှင့် တိုင်းရင်းသား ဒေသများမှတပ်များ ရုတ်သိမ်းရန်၊ ဖိအားစတင်ပေးရန်တောင်းဆို လိုက်သည်။
နော်ဝါးခူရှီး ။ ။ +၆၆ ၈၆ ၁၁၈ ၂၂၆၁ (အင်္ဂလိပ်နှင့် ကရင် ဘာသာ)
နာဗစ်ဘွန် ။ ။ +၆၆ ၈၁ ၀၃၀ ၆၃၇၀ (မြန်မာဘာသာ)